Fitaovana biodegradable: toetra, fampiasa ary tombony | Green Renewable
Portillo Alemanina | 14/09/2021 10:49 | fanodinana
Manoloana ny olana lehibe manerantany izay ananantsika amin'ny fandotoana plastika, ny akora biodegradable. Izy ireo dia fitaovana mandoto noho ny fidiran'ny zavamananaina toy ny holatra sy ny zavamiaina bitika hafa izay misy eo amin'ny natiora. Misaotra an'izany fa tsy tafahitsoka amin'ny tany na amin'ny fomba inona izy ireo ary tsy mandoto. Ny dingan'ny fandringanana dia manomboka amin'ny bakteria mamoaka anzima ary mankafy ny fanovana ny vokatra voalohany ho lasa singa tsotra kokoa. Farany, alaina tsikelikely tsikelikely daholo ireo microparticle tany rehetra.
Noho io antony io, satria lasa zava-dehibe tokoa ireo akora biodegradable, dia hatokanay ity lahatsoratra ity hilaza aminao izay rehetra ilainao ho fantatra momba azy ireo.
1 Inona avy ireo akora biodegradable
2 Karazana akora biodegradable
2.1 Plastika avy amin'ny starch sy rai
2.2 Plastika syntetika sy voajanahary voajanahary
2.3 Taratasy sy lamba voajanahary
3 Tombony azo avy amin'ny akora biodegradable
Inona avy ireo akora biodegradable
Ireo akora biodegradable dia raisina ho fitaovana rehetra izay simba noho ny fidiran'ny holatra sy ny zavamiaina bitika hafa izay misy eo amin'ny natiora. Rehefa notafihan'ny bakteria ny singa iray, dia manomboka ny dingan'ny famotehana, izay mamoaka anzima mba hanovana ny vokatra voalohany ho lasa singa tsotra kokoa. Ny dingana farany dia mifoka tsikelikely avy amin'ny tany.
Etsy ankilany, ny akora tsy mety lo dia mijanona amin'ny tany fotsiny ary manimba ny tontolo iainana manodidina. Ny ankamaroan'ny akora syntetika maoderina dia tsy manana bakteria afaka manamora azy ireo, noho izany dia mijanona mandritra ny fotoana maharitra izy ireo, ka mandoto ny tontolo iainana.
Soa ihany, ny fandrosoana ara-tsiansa dia nanampy antsika tamin'ity sehatra ity ihany koa, namorona fitaovana maharitra sy voajanahary afaka manolo ireo izay efa lany andro sy manimba ankehitriny. Misoroka fanangonana fitambaran-java-boahary tsy voajanaharyVahaolana roa no dinihina ankehitriny: ny fampiasana ny fakany na ny mikraoba mikraoba izay afaka manafika ireo vokatra izay heverina ho tsy simba, na ireo fitaovana mamorona izay mety ho simbain'ireo karazana aretina mahazatra.
Amin'izany fomba izany, ny fanangonam-bokatra izay mitranga isan'andro eto amin'ny planetantsika, ary tsy fantatry ny olona maro, dia afaka mifarana indray mandeha na ho an'ny rehetra, na mampihena be ny fonosana, taratasy, fitaovana sns. Tsy mila miandry mandritra ny taona maro ianao mandra-panjavona tanteraka eo amin'ny zavamananaina.
Karazana akora biodegradable
Andao hojerentsika hoe iza no fitaovana biodegradable mahazatra sy malaza indrindra:
Plastika avy amin'ny starch sy rai
Ny plastika biodegradable vita amin'ny tsiranoka katsaka na varimbazaha dia amokarina amin'ny ambaratonga indostrialy, ohatra, hanamboarana harona fako. Mety haharitra 6 ka hatramin'ny 24 volana ny fahasimban'ireny plastika ireny, ambanin'ny tany na anaty rano, arakaraka ny hafainganam-pandeha nampidirina ny starch.
Toy izany koa ny plastika biodegradable feno vita amin'ny ravina na kofehy voafintina dia afaka manolo ny plastika miorina amin'ny solika. Ny iray amin'izy ireo dia miorina amin'ny starch rye ary tonga amin'ny endrika akora granular izay ampiasaina hanamboarana lovia. Amin'ny fanovana ny firafitry sy ny plastika dingana, toetra ara-teknika toy ny hakitroky, lasitike modulus, tanjaka hery, deformation azo azo, sns. Ny fananan'ireto fitaovana ireto dia mitovy amin'ny an'ny polymers mahazatra petrochemical.
Plastika syntetika sy voajanahary voajanahary
Amin'ity vondrona ity dia misy karazana polymèntetika synthetic azo simba voajanahary na amin'ny alàlan'ny fanampiana akora afaka manafaingana ny fahasimban'izy ireo. Ireo plastika ireo dia misy plastika misy oxygen-biodegradable sy poly (ε-caprolactone) (PCL). Ny plastika azo tanterahina biodegradable dia plastika synthetic, izay ampidirina ireo additives simika izay mampiroborobo ny fihanaky ny otrikaina mba hampidirana na hanafainganana ny fizotry ny fahasimban'ny oksidia hamokatra vokatra biodegradable. PCL dia polyesterôma thermoplastic biodegradable sy biocompatible ampiasaina amin'ny fampiharana ara-pahasalamana.
Polymers voajanahary voajanahary, antsoina koa hoe biopolymers, dia novokarina avy amin'ny loharano azo havaozina. Ny sasany amin'ireo vokatra noresahinay dia misy ny polysaccharides novokarin'ny zavamaniry (zana-katsaka, mangahazo, sns.), polyester novokarin'ny zavamiaina bitika (bakteria maro karazana indrindra), fingotra voajanahary, sns.
Taratasy sy lamba voajanahary
Mampiasa taratasy amin'ny fomba iray amin'ny fiainantsika isan'andro isika, izay mety ho fitaovana voajanahary koa. Mety ho izy ireo lamba famaohana taratasy, mosara, kahie, gazety, taratasy paositra, kitapo taratasy kraft, tapakila, tapakila fijanonana, takelaka taratasy sy kaopy, endrika sy fangatahana, na lahatsoratra manampy mihitsy aza. Koa satria voahodidin'ny taratasy daholo isika, maninona raha ampiasaina indray?
Azonao atao ny mifamadika amin'ny akanjo vita amin'ny akora simika sy landihazo, jute, rongony, volon'ondry na lamba landy. Ankoatry ny landy, ny lamba voajanahary dia mora vidy, ahazoana aina ary miaina. Tsy toy ny lamba sentetika, ny lamba voajanahary dia azo ovaina ary tsy mila mandalo fizotran'ny sentetika. Ny tombony maro azo avy amin'ireto vokatra ireto dia ny fanaparitahana mora foana ary tsy mamokatra vokarin'ny poizina. Etsy ankilany, nylon, polyester, lycra, sns. Izy ireo dia amboarina amin'ny alàlan'ny fanodinana sentetika ary lamba tsy vita simba.
Tombony azo avy amin'ny akora biodegradable
Betsaka ny tombony azo amin'ny fampiasana akora biodegradable. Andao hojerentsika hoe inona izy ireo:
Tsy mamokatra fako: Izy ireo dia fitaovana voajanahary tanteraka izay lanin'ny zavamiaina bitika tsy misy fahasarotana, izany no antony ampiasako azy ireo hiasa amin'ny tsingerin'ny fiainako. Noho izany dia tsy mamokatra fako izy satria tsy mijanona ela any amin'ny fanariam-pako na fanariam-pako.
Tsy miteraka fanangonan-tany: Vahaolana lehibe amin'ny olan'ny habakabaka misy ao amin'ny fanariam-pako ireo, noho ny fanangonam-bokatra tsy simbaina.
Mora ny manamboatra sy manamboatra azy ireo: Azonao atao ny manamboatra saika ny zava-drehetra amin'ny akora biodegradable nefa tsy mampihena ny kalitaony.
Tsy misy poizina izy ireo: ny fampiasana akora biodegradable dia tsy mamela ny fiankinan-doha amin'ny fampiasana fitaovana hafa izay mitaky fanjifana angovo avo kokoa sy fandotoana matotra kokoa.
Mora ampiasaina indray izy ireo: azo ampiasaina tanteraka izy ireo ary tsy mila fizotra sarotra amin'ny fitsaboana azy ireo.
Lamaody: Tsena iray izay mirongatra ary mihamaro hatrany no fantatra momba azy io.
Tsy mandoto izy ireo: Raha miresaka ny fakon'izy ireo isika dia tsy misy akony firy amin'ny tontolo sy ny tontolo iainana ny akora biodegradable.
Mahatonga anao hanohana bebe kokoa: fomba fiasa tsara eo imason'ny natiora sy ny fiainana satria mandray anjara amin'ny fikolokoloana ny tontolo iainana izahay ary manampy amin'ny famoronana fampandrosoana maharitra.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny akora biodegradable sy ny toetrany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Tontolo_iainana » fanodinana » Fitaovana biodegradable
Fahasamihafana eo amin'ny viriosy sy ny bakteria